क्यान्डी नाश स्तर 3914 धोखा दिन्छ र सल्लाह - क्यान्डी क्रश खेल - नि: शुल्क Lives सुझावहरू धोखा दिन्छ
तिमि यहाँ छौ: घर / वर्गीकृत / क्यान्डी नाश स्तर 3914 धोखा दिन्छ र सल्लाह
Last updated on जुलाई 6, 2021 द्वारा Isobella फ्रान्क्स LeaveaComment
९० को दशकमा हामीले ब्रेक गरेको सुन्यौं, KitKat छ! यो वाक्यांश अब क्यान्डी क्रश खेल्नको लागि ब्रेक पाउनको लागि परिवर्तन गर्नुपर्छ. यो खेल सबै उमेर समुहमा यति धेरै लोकप्रिय भएको छ कि तपाईं कसैलाई पनि यसबाट टाढा राख्न सक्नुहुन्न. यसलाई खेल्ने क्रेज दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ. एकचोटि तपाईंले कसैको फोनमा हेर्नुभयो भने तपाईंले निश्चित रूपमा यो अनुप्रयोग फेला पार्नुहुनेछ. कोही शुरुआती चरणमा हुनेछ; अरूहरू यसमा समर्थक हुनेछन् तर तपाईंलाई थाहा छ सबैभन्दा सामान्य पक्ष के हुनेछ? सबैजना निश्चित स्तरमा अड्किनेछन्. तिनीहरू सुरागहरू खोज्दैछन् जसले तिनीहरूलाई यो स्तर पार गर्न मद्दत गर्न सक्छ. त्यसैले हामी यहाँ ल्याइरहेका छौं क्यान्डी क्रश स्तर 3914 धोखा दिन्छ र सल्लाह तपाईंको मद्दतको लागि.
यस स्तरको पछाडिको विचार भनेको यस स्तरमा अवस्थित सबै सामग्रीहरूलाई तल ल्याउनु हो र कोसेढुङ्गामा पुग्नु हो 20,000 यो स्तर पूरा गर्न अंक. यसका लागि, तिनीहरूले तपाईंलाई प्रस्ताव गरेका छन् 25 चालहरू जुन धेरै छैनन् त्यसैले तिनीहरूलाई बनाउँदा सावधान रहनुहोस्? कुल मिलाएर सामना गर्नुपर्छ2अवयवहरू. यदि तपाइँ स्कोर गर्नुहुन्छ 20,000 बिन्दुहरू र ती दुई अवयवहरूको सबै संस्करणहरू तल ल्याउनुहोस्, तब मात्र तपाईं यो स्तर पूरा गर्न र आफ्नो चिन्ता समाप्त गर्न सक्षम हुनेछ. आफ्नो चिन्ता हटाउन, हामी तपाईंलाई धोखा र क्यान्डी क्रसको सुझावहरू प्रदान गर्दछौं 3914.
याद गर्नुहोस् कठिनाई स्तर कठिन छ त्यसैले यो खेल्दा तपाइँ आफ्नो औंलाहरूमा हुनुपर्दछ. बाट उत्तम विचार क्यान्डी क्रश स्तर 3914 धोखा दिन्छ र सल्लाह बोर्डको तल्लो भागबाट सुरु हुनेछ किनकि यसले तपाईंलाई थप विशेष क्यान्डी प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ. बोर्डमा भएका सामग्रीहरूबाट छुटकारा पाउन तपाईं आफ्नो धारीदार क्यान्डीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईंको प्रारम्भिक चरण सकेसम्म धेरै वाफलहरू तोड्न सार्नको लागि हुनुपर्छ. सामग्रीहरूलाई तिनीहरूको दायाँ स्तम्भहरूमा सार्न प्रयास गर्नुहोस्.
एकचोटि तपाईंले यो गर्नुभयो भने तपाईंले विशेष मिठाईहरू बनाउन आवश्यक छ. तपाईंले बनाउनु भएको ती सबै विशेष क्यान्डीहरू मिलाउनुहोस् र सबै लिकोरिस तोड्ने प्रयास गर्नुहोस्, घुम्छ, चकलेट र waffles.
यी सबै तोड्ने पछाडिको विचार यो सबै सामग्रीलाई बायाँबाट तल दायाँ तल ल्याउन. त्यस्तै, तपाईं अन्य सामग्रीहरू पनि माथि बायाँ र केन्द्रबाट दायाँ-हात तिर सार्न चाहनुहुन्छ. यसो गर्नाले तपाइँ तिनीहरूलाई बोर्डबाट हटाउन सक्षम हुनुहुनेछ.
यदि तपाइँ यी सामग्रीहरू बोर्डबाट बाहिर भनिएको चाल भित्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. 25 चाल, त्यसपछि मात्र तपाईं स्तर पूरा गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईं पाइला पाइला चाल्नुभएन भने तपाईं लामो समयसम्म यो स्तरमा अडिरहनु हुनेछ. विशेष क्यान्डीहरू मार्फत हटाउनको लागि तिनीहरूको दाहिने हातमा सबै सामग्रीहरू ल्याउनुहोस्. यो सजिलो थिएन? हामीले यस लेखमा प्रस्ताव गरेका सुझावहरू प्रयोग गर्नुहोस् र जादू हेर्नुहोस्. तपाईं एक पटक भित्र आफ्नो स्तर समाधान गर्न सक्षम हुनेछ. यो हाम्रो चालको सुन्दरता हो.